Toddobo Qodob Oo Kuu Sahlayo Inaad Cagta Saarto Wadada Guusha Iyo Farxada Waayaha Nolosha. | Gaaloos.com
Home » Layaab » Toddobo Qodob Oo Kuu Sahlayo Inaad Cagta Saarto Wadada Guusha Iyo Farxada Waayaha Nolosha.
Toddobo Qodob Oo Kuu Sahlayo Inaad Cagta Saarto Wadada Guusha Iyo Farxada Waayaha Nolosha.
Dejinta hammi iyo hiigsi.
In qofku baadho waxyaabaha uu u baahan yahay inuu sameeyo si uu u guulaysto iyo waxyaabaha ka hor istaagi kara guusha.
Waa inuu joogteeyaa oo ku dedaalaa hayaanka uu ugu jiro guusha.
Waa inaad hubisaa kolba inaad hayso hilinka iyo toobiyaha aad u marayso guusha.
Waa inaad u samirtaa hadimooyinka ku geddaaman jidka guusha oo haddii aad dhib mudato aad u dulqaadato.
Waa inaad niyad-samaan iyo talo saarasho Alle aad la timaaddaa.
Guusha markaad gaadhana, aad Ilaahay u mahadnaqdaa oo ka dheeraataa kibir, una tafoxaydataa sidii aad guulo kale u dhalin lahayd.
Astaamo ayay leeyihiin dadka guulaytay ama kuwa leh awoodo ay ku guulaysan karaan, waxaana ka mid ah:
Isbeddel Jacayl: Dhammaan dadka raba inay nolosha ka sameeyaan guul, waxay naftooda ku qanciyaan inuu isbeddel waajib yahay. Waxay hoos iyo korba dadka uu codkoodu gaadho ugu sheegaan, in isbeddel loo baahan yahay. Waxa mararka qaar dhacda in laguu arko qof qaldan balse waa wax nolosha ku caadiya. Nabi Muxammed csw, ayaa tusaale fiican kuu ah, iyo dhammaan dadka nolosha horumarka ka sameeyay midkastood noloshiisa baadho.
Hummaag iyo qanaaco isbeddelku nooca uu noqonayo: Dhammaan dadka nolosha ka sameeyey horumarka waxay ku qanacsanaayeen, inay gaadhayaan meel ka fiican halkan ay joogaan. Dhammaan waxay madaxa ku haystaan, sawir ka turjumaya nolosha ay geeddiga ugu jiraan. Waxay markaad la sheekaysato ama akhrido buugta taariikh nololeedkooda ka arkaysaa, riyo wakhti ay soo jeedeen, taas oo adiga kuula muuqata hawo, balse isaga ula muuqata xaqiiq, waana ta dhaxalsiisa ku adkaanta nolosha ay rabaan.
Dedaal iyo karti dheeraad ah: Dhammaan dadka wax soo kordhiyay ee kugu xeeran, hadday noqoto sheekh iyo shariifba, mid kasta wuxuu goostay wixii uu beertay, midkasta wuxuu ku naalloonayaa habeenkiisa iyo maalintiisa intuu gashaday, taasaana rag iyo haweenba kala geeyey cirka iyo dhulka.
Go’aan iyo Xoog saarid: Ma jiro qof meel gaadha oon dadka fikirkiisa ku qancin. Xusuuso dhacdadii cajiibka ahayd ee Suubbanihii CSW lagu yidhi, inaader hubka dhig aan ku siinno waxaad rabto sida Suldaannimo, Xoolo, Haween qurxoon, ee intuu aamusay uu ku yidhi “Wallee haddii Dayaxa iyo Cadceedda midba gacan la ii saarayo inaanan ka tagayn waxa aan ku taaganahay”. Dhammaan dadkii noloshan macnaha ku sameeyey waxay ahaayeen kuwo ku adag waxay rabaan kuna qanacsan fikirkooda nololeed.
Samir iyo Dulqaad:U fiirso dadka wax ah ama aad farta ku fiiqdo ee noloshaada ku xeeran. Meel fog ha aadin. Eeg dadka xidhiidhka tooska ah la leh nolosheenna. Ma jiro qof habeen ku gaadhay nolosha uu gaadhay. Mana jiro qof saacadaha tiriyey, si uu u beddelo nolosha uu rabo balse qof kasta wuxuu huray wakhti dheer isagoo muujiyey samir iyo dulqaad xad dhaaf ah, waana sababta uu Suubbanuhu CSW ugu lahaa Asxaabigii ku yidhi “Alle noo bari in dadkan na ciqaabaya uu naga kaafiyo” “Samra Ilma Yaasirow ballantiinu wa jannee”. Taasi wa macnaha samirka iyo dulqadka.
Xirfadda maamulka wakhtiga:dadkani waxay si wanaagsan u maareeyaan wakhtigooda, iyaga oo uga faa’iidaysanaya qabashada waxyaabaha gaadhsiinaya guusha, waxayna ka fogaadaan luminta wakhtiga.
Iskaashi:Dadka guulaystaa waxa ay si fiican u kaashadaan oo ula tashadaan dadka ku xeeran sida xaasaskooda, saaxiibbadood iyo dadka ay hiigsanayaan.
Title: Toddobo Qodob Oo Kuu Sahlayo Inaad Cagta Saarto Wadada Guusha Iyo Farxada Waayaha Nolosha.